Haddii aad xubin ka tahay bulshada Soomaaliyeed oo aad garaneyso xubno kale oo aan haysan internet, fadlan ku wargeli oo u sheeg Shiararka Waxqabadka ee joogtada ah. Shirarka Waxqabadka oo joogto ah ayaa waxaa qabanqaabiya saraakiisha gudaha ee CISP si ay wararka billaha ah ee CISP ay u tusaan kuwa jeclaan lahaa in ay booqdaan shabakadda internet-ka ee CISP oo ay arkaan waxa CISP ay ka qabaneyso degaankooda. CISP waxaa ay qof kasta ku dhiirrigelineysaa in uu ka-qaybgalo shirarkaa uuna jawaab-celin ka bixiyo. Foomamka Jawaab-celinta oo waraaq ku daabacan waxaa laga heli karaa mid kasta oo ka mid ah xafiisyada gudaha dalka ee CISP. Si aad u ogaato sida loo maareynayo jawaab-celintaada, macluumaadkeenna ka eeg dabagalka jawaab-celinta
Si aad u ogaato waqtiga la qabanayo shirka soo socda, fadlan:
- si toos ah ula hadal shaqaalaheenna gudaha
Shiararka Waxqabadka ka ee joogtada ah waxaa ay qayb ka yihiin dadaalka xisaabtanka ee CISP ay u xisaab-celineyso ka-faa’iideystayaasheeda.
Home Nagala soo xiriir Shirirka Waxqabadka